A Podcast Kubata, Syndication, Yekusimudzira Yekutarisa | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 9, 2021 Muvhuro, Mbudzi 22, 2021 Thomas Brodbeck
Gore rakapera raive iro gore podcasting yakaputika mukuzivikanwa. Muchokwadi, 21% yevaAmerican vanopfuura makore gumi nemaviri vakati vakateerera podcast mumwedzi wapfuura, iyo yakawedzera zvishoma nezvishoma gore pamusoro pegore kubva ku12% mugove muna 2008 uye ini ndinongoona iyi nhamba ichiramba ichikura.
Saka wafunga kutanga yako podcast? Zvakanaka, pane zvinhu zvishoma zvekutanga kufunga nezvazvo - kwaunogashira yako podcast uye kwauchasimudzira. Pazasi ini ndanyora mashoma matipi uye zvidzidzo zvakadzidziswa kubva mukusimudzira yedu podcast Edge yeWebhu, saka ndinovimba zvichave zvekushandisa kwauri!
Podcasting Workshop uye Mharidzo
Ini munguva pfupi yapfuura ndakagadzira musangano wemabhizimusi podcasters kuendesa chaiwo marongero ekubatanidza uye kusimudzira yavo podcast. Isu takashandisa dzakawanda dzeidzi nzira ne Dell Mwenje podcast, Kuisundira mukati yepamusoro 1% yeese mabhizinesi podcast.
Kwokutambira Podcast Yako
Usati waendesa kune chero madhairekitori, iwe uchafanirwa kusarudza kwaunoda hondo podcast yako. Kufunga yako podcast yekutambira kunoenderana nezvakawanda pane kwaunogona kuendesa podcast yako sezvo mamwe madhairekitori aine hukama nevamwe. Yedu podcast, Edge yeWebhu, isu tinogamuchira neLibsyn uye ndeimwe yeanonyanya kufarirwa mauto akatenderedza.
Usagashira yako podcast pane yakajairwa webhu inomiririra kana mune yako yazvino webhusaiti. Podcast inomiririra nharaunda ine zvivakwa zvakavakirwa hombe odhiyo faira faira sto uye kurodha pasi kubva pawebhu. Chaiwo maratidziro ekubata webhu anogona kukonzera kukanganiswa kwekuteerera uye zvinogona kukubhadharira mari nemari yekuwandisa pamashandisirwo emagetsi.
Martech ZoneKurudziro ndeye kugamuchira pa Transistor. Unogona kuverenga mhedziso ye podcast chikuva pano, asi muchidimbu, iri nyore kushandisa, ine unlimited show hosting, uye ine mamwe maturusi makuru ekubatana uye bhizinesi.
Saina Kuti uwane Kuyedzwa Kwemazuva gumi nemana kweTransistor
Mamwe mashoma epodcast anotora makambani aunogona kushandisa ndeaya:
ACast - Kuwanikwa kwePodcast, kuteerera, kubata, uye kugovera RSS.
chipingo - Gadzira uye utore zvikamu zvisina muganho, govera show yako kwese kwese, uye uwane mari. Zvese munzvimbo imwe, zvese mahara.
Audioboom - Svitsa vateereri vakazvitsaurira uye tambidza yako mameseji meseji kuburikidza neanoshambadzira ekushambadzira akaisirwa uye mvumo kubva kune yepamusoro tarenda mu podcasting.
Blubrry - Blubrry.com inharaunda yepodcasting uye dhairekitori iyo inopa vagadziri simba rekuita mari, kuwana zvakadzama vateereri zviyero uye kubata yavo odhiyo uye vhidhiyo. Kunyangwe iwe uri mugadziri wezvemidhiya, mushambadzi kana mutengi wenhau, Blubrry ndiyo yako dijitari media interface.
Buzzsprout - Tanga podcasting nhasi mahara podcast yekutambira kubva Buzzsprout, iri nyore kwazvo podcasting software yekutambira, kusimudzira, uye kuteedzera podcast yako.
Vakakandirwa - Kubva pakubata uye kuronga kune yekuita uye analytics, Casted ipuratifomu manejimendi manejimendi evatengesi veB2B vane izwi.
Fireside -Yakasarudzika podcast host ine yakanaka mushandisi interface inosanganisa ese webhusaiti pamwe nepodcast yako.
Libsyn - Libsyn inopa zvese zvaunoda podcast: zvishandiso zvekushambadzira, kuitisa midhiya uye kuendesa, RSS yeTunes, Webhusaiti, Stats, Zvirongwa zvekushambadzira, Zvemukati Zvekutanga, Zvishandiso zveApple, Android & Windows zvishandiso.
megaphone - maturusi ekudhinda, kuita mari, uye kuyera bhizinesi rako repodcast.
Omny Studio - Omny Studio ndeye bhizinesi podcasting mhinduro iyo inosanganisira yepamhepo mupepeti, kuita mari, kutepfenyura kutora, kuzivisa, uye nezvimwe zvinhu zvakawanda.
PodBean - Ultra yakapusa podcast yekutsikisa mhinduro. Unlimited bandwidth uye chengetedzo. Chese chinhu podcaster inoda kuitisa, kusimudzira, uye kuteedzera yako podcast.
simplecast - Shambadzira yako podcast nenzira iri nyore.
SoundCloud - Podcasting pa SoundCloud zvinoita kuti zvive nyore kune chero munhu kuti ataure nyaya, kurodha, uye kugovana. Vaka nharaunda yako pane yakanyatso gadzikana uye intuitive odhiyo yekutambira chikuva pasi.
Spreaker - Spreaker ane zvese! Seta account yako uye gadzirira kurekodha podcast kana kuitisa mhenyu redhiyo inoratidza kubva kune yako komputa kana nhare mbozha.
Podcast Jet - Premium Podcast Hosting: Inokurumidza uye Yakagadziriswa Dhirivhari.
Mushure mekumisa yako podcast yekutambira, iwe unozofanirwa kuve neyakavimbika RSS feed. Nguva zhinji iwe paunenge uchimisikidza iyo podcast yekutambira account iwe unozoshaya chimwe chinhu chinotyora iyo RSS feed. Usati waendesa kune chero dhairekitori, iwe uchafanirwa kutarisa kuti uone kana yako RSS feed iri inoshanda. Kuti uedze yako RSS feed, shandisa Kanda Yekumhanyisa Validator kuona kana iwe wakakanganisa. Kana iwe uine chakaringana chikafu, saka svetukira mune yako dhairekitori kutumira.
Kwatinofanira Kubatanidza Podcast yako
Side Note: Usati waendesa podcast yako kune chero eanowanikwa madhairekitori, ini ndinokurudzira kuti iwe uve neanopfuura imwe podcast episode mune yako RSS feed. Iwe unogona kuendesa kune akawanda madhairekitori neine chete podcast, asi kune vazhinji vateereri kune yako podcast, ivo vachazoda kuona kupfuura chikamu usati wanyorera kuchiratidzo chako.
nekuti iPhone uye Android zvishandiso zvinodzora musika wekufambisa, aya maviri ekutanga kunyoreswa anofanirwa kune yega podcast!
iTunes - Mushure mekugadzira yako RSS feed, kuendesa podcast yako ku iTunes kunofanirwa kuve nhanho yako yekutanga. iTunes ine imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzevateereri kune podcasters. Iwe unozotanga kuve neApple ID, kana uchitova ne iPhone, unofanirwa kunge uine ID. Saina izvi iTunes Podcast peji rekubatanidza neApple ID yako uye unamate yako RSS feed mune iyo URL munda uye tumira yako show. Zvichienderana neakaundi yako, inogona kubvumidzwa nekukurumidza kana kuti inogona kutora mazuva mashoma. Paunongogamuchirwa muTunes, yako showa inozoonekwa mune akawanda emamwe akasiyana podcatchers otomatiki sezvo iwo maturusi anowana mafidesi avo kubva kuTunes. Nehurombo, uine iTunes, iwe haugone kuwana chero analytics yakabatana neakaunti yako.
Bhalisa Podcast yako neTunes
Google Podcasts Manager - Google yakaburitsa chikuva chine mamwe akatanhamara ekuongorora ekuteerera kwepodcast yako. Iwe unogona kuona iyo nhamba yemitambo, inotamba mumazuva makumi matatu ekutanga, avhareji yenguva, uyezve woongorora mashandiro pane nguva. Saina neakaundi yeGoogle, uye uteedzere matanho ku wedzera podcast yako.
Bhalisa Podcast yako neGoogle
Pandora - Pandora anoenderera mberi kuva vateereri vakawanda uye anotsigira zvizere podcast futi, kunyangwe nekwaniso yekuiongorora.
Bhalisa Podcast yako nePandora
Spotify - Spotify inoenderera mberi ichiwedzera kuita zvemukati uye, nekutenga kweAnchor, iri kutora chinangwa chakakomba chekuva nepakati. Uine vashandisi vakawanda, haudi kupotsa!
Bhalisa Podcast yako neSpotify
Amazon - Amazon Music ndeye hama nyowani asi neAnonzwika, Prime, uye Alexa's voice mubatsiri anosvika, haufanire kusiya ichi chakakosha chiteshi.
Bhalisa Podcast yako neAmazon Music
Nesarudzo, iwe unogona zvakare kunyoresa yako podcast nemidziyo iyi uye madhairekitori kuti uwedzere kusvika kwako:
Acast - Kunyangwe kana podcast yako ikabatwa pane mumwe mupi, unogona kunyoresa podcast yako neyemahara yekutanga account.
Wedzera Podcast yako kuAcast
AnyPod - AnyPod inyanzvi inozivikanwa yeAmazon Alexa-powered zvishandiso.
Wedzera Podcast yako kune AnyPod
Blubrry - Blubrry iri zvakare dhairekitori hombe pane podcast paInternet, iine anopfuura mazana matatu mazana matatu ezviuru zvepodcast zvakanyorwa. Ivo zvakare vanopa kushambadzira uye mamwe masevhisi kune podcasters.
Gadzira Yemahara Blubrry Akaunti uye Wedzera Yako Podcast
Breaker - Breaker imusika wekutengesa uye kukurudzira ma podcast ako. App yavo yakanaka chose, uye inoita kugovana pasocial podcast yako kunyanya kubatsira.
Unganidza Podcast Yako kuBreaker
Castbox - Castbox inopa Castbox Musiki Studio, seti yezvishandiso zvine robust podcasting analytics kuitira kuti iwe ugone kuyera uye kusangana nevako vanonyorera pamwe nekuyerera uye nekupa kurodha pasi.
Mafambiro Ekutumira Yako Podcast kuCastbox
iHeartRadio - For iHeartRadio, apa ndipo panobhadhara kuve neLibsyn semugashiri wako. Ivo vane hukama neIHeartRadio uye iwe unogona kumisikidza yako Libsyn account kuti otomatiki kugadzira uye kufudza yako wega chiteshi. Kuti uise izvi kumusoro, pasi pe "Kwokuenda" tab muaccount yako, tinya pane "Wedzera Nyowani" uye wobva wateedzera rairo dzekumisikidza iHeartRadio rwizi. Ongorora: Podcast yako inoda kuve inoshanda kweinopfuura mwedzi miviri mukati meLibsyn usati wagona kuzviisa kuIHeartRadio.
Tumira Podcast yako kuIHeartRadio
kwidibira - Kana podcast yako yatove muTunes, inozoonekwa mukati mezuva paOvercast. Kana zvisiri, unogona kuzviwedzera nemaoko:
Nemaoko Wedzera Podcast yako kuOvercast
Pocket Casts - Iyo webhu-yakavakirwa uye nharembozha application inogonesa vashandisi kubata nekuteerera pamadhizaini. Endesa podcast yako kuburikidza Homwe Inokanda inotumira peji.
Endesa Podcast Yako kuPocket Casts
Podchaser - podcast dhatabhesi uye chishandiso chekutsvaga. Chinangwa chavo ndechekuti zviite nyore kuti iwe upe mhinduro pamusoro pemapodcast aunoda uye uwane nyore ma podcast. Tsvaga podcast yako paPodchaser uye unogona kuitora uchishandisa email yakanyoreswa mune yako podcast feed.
Kumbira Podcast yako paPodchaser
Podknife - Podknife iri pamhepo dhairekitori repodcast iro rinoita basa rakakura rekuronga ma podcast nemusoro wenyaya nenzvimbo. Vashandisi vanogona zvakare kuongorora uye kufarira avo avanofarira podcast. Ukangonyoresa uye kupinda, iwe unowana yekuendesa chinongedzo mumenyu.
RadioPublic - RadioPublic ndiyo ine hutano, inotyisa, uye ine mari inochengetedza podcast yekuteerera chikuva podcasters vanga vakamirira. Isu tinobatsira vateereri kuwana, kubatana navo, uye nekupa mubairo mari vanogadzira podcast -iwe Simbisa show yako paRadioPublic kuti utange kubatana nevateereri vako nhasi.
Kumbira Podcast Yako paRadioPublic
Stitcher - Ini pachangu, Stitcher ndiye wandinofarira podcast app. Yese yangu podcast yekuteerera inoitwa kuburikidza neapp iyi. Stitcher iri yemahara app ine anopfuura 65,000 maredhiyo uye ma podcast anowanikwa. Kuti upe podcast yako, uchafanira kusaina semumwe wako. Ma stats ako ekuratidzira anowanikwa pane Partner Portal futi.
Wedzera Podcast yako kuStitcher
TuneIn - TuneIn ndeimwe yemahara dhairekitori iwe yaunogona kuendesa yako podcast. Kuendesa podcast yako, uchafanirwa kuzadza fomu ravo. Iwe hauzove neakaundi neTuneIn sezvaungaita iwe nemamwe madhairekitori. Saka, kana iwe uchida kugadzirisa chero chinhu kune chako chikafu, iwe uchafanirwa kuita kuburikidza neiyi nzira zvakare. TuneIn zvakare ine hunyanzvi hweAmazon uko yako podcast inogona kuridzwa kuburikidza neA Alexa-powered zvishandiso!
Wedzera Podcast yako kuTuneIn
Vurbl - yekushambadzira odhiyo yekuenda kune ese marudzi evagadziri veaudio, uye chero munhu anoda kuteerera kurira. Isu tinotsigira vanogadzira odhiyo kuburikidza neyedu chiteshi modhi uye tinobatsira vateereri kubatana nezvakakosha zvemukati kuti vateerere.
Kumbira Yako Vurbl Chiteshi
Goverana maAudioograms paSocial Media
Vadivelu Comedy Audiogram - Dzorera odhiyo yako kuti uite mavhidhiyo emagariro ne Vadivelu Comedy Audiogram.
Musoro wemusoro - Gadzira waveform audiograms, zvizere zvikamu muvhidhiyo, otomatiki kunyora, uye kusimudzira yako podcast nemavhidhiyo akawanda sezvaunoda pa Musoro wemusoro.
Wavve - Wavve inoita kuti iwe ugadzire audiograms - mavhidhiyo ane yako podcast odhiyo - iyo inogona kugovaniswa munharaunda kushandisa mutambi wavo.
Maitiro Ekugadzirisa Yako Podcast
Wanga uchiziva here kuti Google ikozvino inoratidzira podcast uye zvakare inozviratidza pane carousel pane yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji? Google inopa ruzivo pamatanho eku ita chokwadi chekuti podcast yako yakanyorwa mune yavo chinyorwa chekutsigira. Ini ndanyora maitiro ekuona kuti Google inoziva kuti une podcast kana unayo WordPress asi urikugamuchira iyo podcast pane yekunze podcast kubata basa.
Wedzera Podcast Smart Banner
Zvishandiso zveIOS zvine mukana wekuwedzera smart banner kumusoro kwewebsite yako kune vashandisi veApple iPhone kuti vaone podcast yako, vhure muPodcasts App, uye unyore kwairi. Unogona kuverenga kuti ungazviite sei muchinyorwa chino pa iTunes Smart Banners ePodcasts.
Kune mamwezve madhairekitori akabhadharwa aunogona kushandisa kuitisa yako podcast kana kungoshandisa seimwe dhairekitori. Kunyange iwe uchizengurira kubhadhara zvimwe zveizvi, hauzomboziva kuti vateereri vako vari kuteerera kupi. Ini ndaikurudzira kuyedza iwo ese kweinenge gore rimwe chete uye uone kuti ndedzipi stati iwe dzaunowana kubva kune aya madhairekitori usati wabvisa. Mazhinji eaya anotanga neakaundi account, asi iwe unobva wakurumidza kupererwa nenzvimbo muakaundi account yako.
ACast - ACast inopa zvese zvaunoda kuti ugadzire uye ugovane podcast yako kwese kwese.
Vadivelu Comedy AudioBoom - Vadivelu Comedy AudioBoom inogonesa podcasters kubata, kugovera uye kuita mari yako odhiyo.
PodBean - PodBean yakafanana chaizvo neSpreaker seyakagamuchirwa podcast. Mune ruzivo rwedu, panga paine nyaya nekutorwa kweedu RSS feed mune kuti hazviwanzo kuwana zvikamu zvechizvino-zvino. Asi zvakadaro, inzvimbo inozivikanwa kwazvo pakati pevagadziri.
PodSearch - PodSearch inopa nyore kushandisa zvishandiso zvekutsvaga, zvinosanganisira zvikamu, zviratidziro zvepamusoro, zviratidzo zvitsva, uye mazwi akakosha, kukubatsira iwe kuti uwane podcast yaunofarira. Bhalisa pano.
SoundCloud - SoundCloud ndeimwe yemadhairekitori matsva kuti Edge yeWebhu Radio irimo uye neakaundi yedu yeLibsyn, takakwanisa kuenzanisa vaviri pamwe chete uye kugadzirwa kweakaundi kwaive nyore kwazvo kuburikidza neLibsyn.
Spreaker - Spreaker inomiririra inomiririra, kunyanya pakati pevanyengeri vanoda kutepfenyura zviripo. Ivo vane mutambi mukuru anokurega iwe uchiita kutenderera kuripo pamwe nekuchengetedza yega yega episode yeavo vakapotsa nhepfenyuro yepamoyo.
Ndine chokwadi chekuti kune vamwe, asi aya ndiwo madhairekitori atinoshandisa pairi Edge Media Studios kune edu podcast ekugadzira vatengi. Kana iwe uine vamwe vamwe vandinogona kunge ndakarasikirwa, ita shuwa kuti undizivise mune zvakataurwa pazasi!
Podcast Webhu Vatambi
WordPress Podcast Sidebar Widget - zvisinei nekuti yako podcast inogarwa kupi, kuiwedzera kune yako saiti inzira yakanaka yekuwana vamwe vateereri vanokodzera. Iyo WordPress Podcast Sidebar inobvumira zvese zviri zviviri widget kana shortcode kuti isimbise yako yese podcast feed (ine mutambi) chero kupi zvako kune yako saiti.
Jetpack - WordPress 'premiere plugin yekusimudzira yako saiti ikozvino ine podcast block iwe yaunogona kuwedzera kune yako zvemukati izvo zvinongo gadzira iyo podcast player.
Heano mamwe ekuwedzera akabhadharwa plugins ayo acharatidza ako podcast zvakanaka mukati meWordPress.
MP3 Anonamira Player WordPress Plugin
HTML5 Audio Players WordPress Plugins Sumbu
Nyore Audio Player WordPress Plugin
Usakanganwa iro rakakosha basa iro rezvemagariro venhau rinogona kutamba mukusimudzira ako podcast, zvese zvitsva nezvakale! Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram… kunyangwe Google +… zvese zvinogona kukubatsira iwe kukura vateereri vako uye kutyaira vakawanda vanoteerera uye vanyoreri vewako zvemukati.
Nesocial media management chishandiso senge Agorapulse, iwe unogona kumisa mitsara kumusoro kune ese kune iwo ma profiles zviri nyore, pamwe nekumisazve zvikamu zvinodzokororwa zveavo ma podcast iwe aunofunga kuti ndiwo egreen. Kana, kana iwe ukashandisa chishandiso senge Feedpress, iwe unogona kushambadzira otomatiki yako podcast kune ako enhau midhiya profiles otomatiki.
Sezvo iwe uchikura vateereri vako pamapuratifomu, mafeni matsva anogona kunge asina kuona ako ekare podcast, saka ndiyo nzira yakanaka yekuwedzera kuoneka. Iko kiyi ndeyekugadzira yemagariro midhiya zvinyorwa izvo zviri kuita, pane kungova kutepfenyurwa kweako podcast zita. Edza kubvunza mibvunzo kana kunyora makuru anotora. Uye kana iwe wakabvunzurudza kana kutaura chimwe chigadzirwa kana chinokurudzira, ita shuwa yekuzvimaka mune ako masocial share!
kuburitsa: Ndiri kushandisa affiliate links mukati meiyi positi kune akati wandei zvigadzirwa.
Tags: acastMusic amazonanypodaudioboomBlubrrybhokisi rakakandaCastroEdge midhiyakumucheto midhiya studioepod dhairekitorigoogle mutambokurova kwemoyoItunesJetpacklibsynKushambadzira Podcastmartech kubvunzurudzwaPodbeanpodcast madhairekitoripodcast dhairekitoriPodcast feedpodcast kubatapodcast metricskusimudzira podcastPodcast syndicationpodcastingpodchaserpodknifemupiroSoundCloudspotifyspreakerstitchertumira podcast yakoSyndicationtuneindzanicwavepekugarakupi kwekusimudzirakupi kwekubatanaWordPress
Tom Brodbeck ndiye Senior Dhijitari Strategist & Dhijitari Chikwata Chekutungamira kuHirons, izere-sevhisi yekushambadzira agency muIndiapolis. Chiitiko chake chakanangiswa kwakatenderedza SEO, kushambadzira kwedhijitari, kushambadzira webhusaiti, uye odhiyo / vhidhiyo kugadzirwa. Akave akaverengerwawo paSocial Media Nhasi uye Tsvaga Injini Zvinyorwa
Matangiro Anogona Kukunda Zvakajairwa Kushambadzira Tekinoroji Matambudziko
Headliner: Vaka Audiograms YePodcast Yako Kuti Usimudzire Zvemagariro